वेब स्क्रैपिंग टूल्स जसले तपाईंलाई डाटा एक्सटेन्शनमा समय बचत गर्नेछ - सेल्टल्ट युक्तिहरू
तपाईं आफ्नो उत्पादन साइट विकास गर्दै हुनुहुन्छ, जीवन थप्न गाह्रो काम गर्दै तपाईंको अनुप्रयोगमा डेटा फीडहरू, वा केवल अनुसन्धानको लागि डेटा निकाल्न चाहानुहुन्छ, केही प्रसिद्ध वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू धेरै समय बचत गर्न सक्छ र हामीलाई सहि राख्न सक्छ। यसैले हामीले चार भन्दा शक्तिशाली र उपयोगी वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरूमा छलफल गरेका छौं जुन निश्चित रूपमा तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्नेछ।
विभिन्न प्रकारका स्वचालन सफ्टवेयर विकास गर्न माईपथ मार्फत स्क्रिन स्क्रैपिंग र वेब र डेस्कटप दुवैका लागि वेब स्क्रैपिंग उपकरण जस्ता विशेषताहरू छन्। यूपाथ वेब स्क्रैपर गैर-प्रोग्रामरहरू र गैर-कोडकहरूको लागि एक आदर्श र सही समाधान रहेको छ। यसले सजिलै साधारण वेब डेटा निष्कर्षण चुनौतिहरू पार गर्न सक्छ, जस्तै पृष्ठ नेविगेसनहरू, फ्ल्यास डाइजिङ, र PDF फाइल स्क्रैपिंग। तपाईले भर्खरै यसको स्पीकरिंग विजार्ड खोल्न आवश्यक छ र तपाइँलाई हटाउनु भएको जानकारीलाई हाइलाइट गर्न आवश्यक छ। यो उपकरणले आफ्नो प्रकार्य सेट समय भित्र प्रदर्शन गर्छ, र आउटपुट निश्चित हुनेछ शानदार। तपाईंले चाँडै उचित CSV र एक्सेल कागजातहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमको साथ, तपाईं फारम भरने र नेविगेशन को स्वचालित गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। मलाई यहाँ भनौं कि यो नि: शुल्क संस्करण सीमित सुविधाहरूसँग आउँछ, तर प्रीमियम संस्करण एकदम महंगी छ र निजी ब्लग मालिकहरू वा वेबमास्टर्सहरू उपयुक्त हुने छैन।
2. आयात .io:
आयोत।.io हामीलाई एक निःशुल्क डेस्कटप अनुप्रयोग प्रदान गर्दछ र वेब पृष्ठहरूको ठूलो संख्याबाट डाटा स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ। यो सेवाले सबै वेब पृष्ठहरूको सम्भावित डाटा स्रोतहरूको रूपमा व्यवहार गर्दछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूका लागि API हरू उत्पन्न गर्छ। यदि तपाईले पेश गर्नुभएको पृष्ठ पहिले प्रक्रियामा राखिएको थियो, तपाईले यसको एपिआइ तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहुनेछ। अन्यथा, Import - ventilatore da soffitto senza luce dc migliore.io ले 20 घण्टा भित्र जडानकर्ता र निकायको मद्दतबाट स्क्रैपिंग म्याट्रिक्स बनाउन प्रक्रियाको माध्यमबाट मार्गदर्शन गर्न सक्छ। यो सेवा अद्भुत र प्रयोग गर्न सजिलो छ, र तपाइँलाई कुनै पनि टेक्निकल कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, Import.io एक वेब पेजबाट एकल क्लिकको साथ अर्कोमा नेभिगेट गर्न सकिदैन। कहिलेकाँही, यो रिपोर्टहरू पेश गर्न दुई दिन लागु हुनेछ।
किमोनो एक प्रसिद्ध छ र एक राम्रो वेब स्क्रैपिंग उपकरण मध्ये एक डाटा निकासी मा आफ्नो समय बचत गर्न को लागि। यो कार्यक्रम विकासकर्ताहरू र प्रोग्रामरहरू बीचको प्रसिद्ध छ जसले आफ्ना उत्पादनहरूलाई कुनै पनि कोड बिना सशक्त बनाउन चाहन्छ। यसले तपाईंको समय बचत गर्नेछ किनभने तपाइँ यो उपकरणको प्रशिक्षणको सकारात्मक र नकारात्मक उदाहरणहरू प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, एपीआई तपाईंको इच्छाको वेब पेजहरूका लागि सिर्जना गरिएको छ र डेटा कुनै पनि रूपमा लेबल गर्न सकिन्छ। किमोनो धेरै काम गर्दछ र स्टक बजार र समाचार फिड्स को बारे मा डेटा प्राप्त गर्न को लागी महान छ। दुर्भाग्यवश, कुनै पृष्ठ नेविगेसनहरू उपलब्ध छैनन्, र हामीले यो उपकरणलाई प्रशिक्षित गर्नको लागि केही समय खर्च गर्नुपर्दछ पहिले तपाईले तपाइँको लागि सही डाटा निकाल्नु पर्छ।
4. स्क्रिन स्क्रैपर:
स्क्रिन स्क्रैपर अर्को शक्तिशाली वेब स्क्रैपर छ जुन नेभिगेसन, मूल्याङ्कन, र सटीक डेटा एक्टिविटीहरू धेरै कठिन र जटिल कार्यहरूसँग टाढा गर्दछ। यो कार्यक्रमलाई केही प्रोग्रामिंग क्षमता चाहिन्छ र तुरुन्तै सुरु गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, तपाईंले प्रोक्सी थप्न सक्नुहुन्छ, र मिनेटमा भित्रको डेटाको निकालेको ढाँचाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरणले जाभास्क्रिप्ट र एचटीएमएलको साथ काम गर्छ। तपाईं यसलाई Citrix प्लेटफर्म र अन्य समान प्लेटफर्मको साथ पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। एकमात्र अन्त हो कि यो एक महंगी प्रोग्राम हो र तपाईंले कार्यक्रमको प्रयोग गर्न मूलभूत वा उन्नत कोडिङ कुञ्जी प्राप्त गर्न सक्दछ।